Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar) (as of 29-11-2020, 8:00 pm)
Dashboard in Desktop View Dashboard in Mobile View
​​ မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများ - Click Here ​
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Reports (Myanmar) - Click Here ​
Quick and Dirty Analysis on The Daily Situation of COVID-19 in Myanmar - Click Here ​
COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်မှု ရှိခဲ့သူများ သိရှိစေရန်နှင့် သတင်းပေးပို့ရန် - Click Here ​
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 209 (World Health Organization)
Data as reported by 16 August 2020, 10 AM Central European Time (CET)
SITUATION IN NUMBERS (total and new cases in last 24 hours)
Globally - 21,294,845 confirmed, 761,779 deaths
Africa - 945,165 confirmed, 18,476 deaths
Americas - 11,420,860 confirmed, 414,326 deaths
Eastern Mediterranean - 1,723,673 confirmed, 45,704 deaths
Europe - 3,754,649 confirmed, 214,092 deaths
South-East Asia - 3,040,168 confirmed, 59,875 deaths
Western Pacific - 409,589 confirmed, 9,293 deaths
Global Level - Very High
Download PDF File - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Reports
Download PDF File - List of Countries with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Local Transmission
Key Activities taken by MoHS - Click Here ​
ဗဟိုကော်မတီသို့ လှူဒါန်းမှုများအား လက်ခံရရှိမှုများ - Click Here ​
‌ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ - Click Here ​
ဒီနေ့အတွက် သိကောင်းစရာများ - Click Here ​
‌ ကျောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ - Click Here ​
ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် - Click Here ​
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာများနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ - Click Here ​
စဉ် မိမိဖတ်ရှုလိုသည့် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ
၁ Traveller Advice for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) - ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက် (7-1-2020)
၂ ​​ ​ ဆောင်းရာသီကာလ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပေးနှိုးဆော်ချက် (၈-၁-၂၀၂၀)
၃ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ (၂၆-၁-၂၀၂၀)
၄ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Health Advice for Travellers - ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက် (26-1-2020)
၅ Health Declaration Card with Health Advice for Travellers (Myanmar, English & Chinese Languages) (26-1-2020)
၆ သင်နှင့် သင့်မိသားစုအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပါ (၂၆-၁-၂၀၂၀) (ပိုစတာ)
၇ Sticker for Bus and Public - ဘတ်(စ်)ကားများတွင် ကပ်ထားနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး စတစ်ကာ Version 1.2 (3-2-2020)
၈ Poster for Hotel, Tourism & Travellers - ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ခရီးသွားလာသူများအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး ပိုစတာ Version 1.2 (3-2-2020)
၉ 2019 Novel Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရန် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ (Version 1.0, 3-2-2020)
၁၀ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (၄-၂-၂၀၂၀) (Billboard)
၁၁ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်း လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ (Cough Etiquette) (၅-၂-၂၀၂၀)
၁၂ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): သင်နှင့် သင့်မိသားစုကျန်းမာရေး စနစ်တကျလက်ဆေးပေး (6-2-2020)
၁၃ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ မောင်တို့မယ်တို့ လိုက်နာစို့ (7-2-2020)
၁၄ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Health Education Posters & Traveller Advice in Chinese Language (7-2-2020)
၁၅ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် 2019-nCoV လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလူနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံဆင်းလူနာများအား လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များ (ပိုးတွေ့လူနာ) (11-2-2020)
၁၆ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် 2019-nCoV လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလူနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံဆင်းလူနာများအား လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များ (ပိုးမတွေ့လူနာ) (11-2-2020)
၁၇ ကောလာဟလ သတင်းမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (13-2-2020)
၁၈ Q&A for COVID-19 (17-2-2020)
၁၉ Health warning and awareness on bus and airplanes before departure (17-2-2020)
၂၀ COVID-19 IECs in Shan Language (17-2-2020)
၂၁ COVID-19 IECs in Kachin Language (18-2-2020)
၂၂ ​​ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကျန်းမာရေးပညာပေး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ချက်များ (တိုင်းရင်းသား ဘာသာသာစကားများ) ကို Download ရယူနားဆင်ရန် (21-2-2020)
၂၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံ ပန်ကြားခြင်း နေပြည်တော်၊ (23-2-2020, 22:30 p.m)
၂၄ Cabin Announcement for Prevention of Coronavirus (COVID-19) - လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အသိပေးပြောကြားချက် (25-2-2020)
၂၅ COVID-19: Health Advice for Travellers - ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက် (26-2-2020)
၂၆ COVID-19: Health Declaration Card with Health Advice for Travellers (Myanmar, English & Chinese Languages) (26-2-2020)
၂၇ Coronavirus Disease (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံ ပန်ကြားခြင်း နေပြည်တော်၊ (28-2-2020, 11 a.m)
၂၈ တေးသံရှင် မနော၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အသံလွှင့်ပြောကြားချက် (WAV File 20.2 MB) - Radio/FM များတွင် ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့် ရပ်ရွာဒေသများတွင် အသံချဲ့စက်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ရန်
၂၉ တေးသံရှင် မနော၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အသံလွှင့်ပြောကြားချက် (MP3 File 4.60 MB) - Radio/FM များတွင် ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့် ရပ်ရွာဒေသများတွင် အသံချဲ့စက်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ရန်
၃၀ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ပါ ပိုစတာ (Version 1.3) (1-3-2020)
၃၁ ဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Biosafety & Biosecurity Protective Procedures for Mekong Basin Cross-border) (Dec 2019)
၃၂ COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများသို့ အသိပေးနှိုးဆော်ချက် နေပြည်တော်၊ (3-3-2020)
၃၃ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးသွားများအတွက်) 10-3-2020
၃၄ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (ပြည်သူများအတွက်) 10-3-2020
၃၅ ကောလာဟလ သတင်းမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (12-3-2020,10:00PM)
၃၆ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားချက် (21-3-2020)
၃၇ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) နှင့်ပတ်သက်၍ အမေးများသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (17-3-2020)
၃၈ COVID-19: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံအလုပ်ရုံများသို့ လမ်းညွှန်ချက် (19-3-2020)
၃၉ အဆိုတော် သွန်း၏ "မိမိကစ ကာကွယ်ပါ (COVID-19)" ကျန်းမာရေးပညာပေးသီချင်း WAV Song File (59.51 MB)
၄၀ အဆိုတော် သွန်း၏ "မိမိကစ ကာကွယ်ပါ (COVID-19)" ကျန်းမာရေးပညာပေးသီချင်း MP3 Song File (12.4 MB)
၄၁ အဆိုတော် သွန်း၏ "မိမိကစ ကာကွယ်ပါ (COVID-19)" ကျန်းမာရေးပညာပေးသီချင်း MP4 Video File (397.14 MB)
၄၂ ဟိုတယ်နှင့် Facility Quarantine Centre များတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (24-3-2020)
၄၃ COVID-19 ဆပ်ပြာနှင့် ရေ ကို အသုံးပြု လက်ဆေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပါ (24-3-2020)
၄၄ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ (24-3-2020)
၄၅ COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ မောင်တို့မယ်တို့ လိုက်နာစို့ (24-3-2020)
၄၆ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ပိုးကရင် ဘာသာ) (24-3-2020)
၄၇ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (စကောကရင် ဘာသာ) (24-3-2020)
၄၈ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ရခိုင် ဘာသာ) (24-3-2020)
၄၉ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (တီးတိန် ဘာသာ) (24-3-2020)
၅၀ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ကယန်း ဘာသာ) (31-3-2020)
၅၁ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (အခါ ဘာသာ) (2-4-2020)
၅၂ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ပအို့ဝ် ဘာသာ) (3-4-2020)
၅၃ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (မွန် ဘာသာ) (3-4-2020)
၅၄ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (လားဟူ ဘာသာ) (5-4-2020)
၅၅ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ပိုးကရင်ဘာသာ) (6-4-2020)
၅၆ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ပအိုဝ်းဘာသာ) (6-4-2020)
၅၇ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (Chinese Language) (6-4-2020)
၅၈ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ ( ကချင် ဘာသာ - ၅ မျိုး) (29-4-2020)
၅၉ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ( ရှမ်း ဘာသာ - ၂ မျိုး) (29-4-2020)
၆၀ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ (25-3-2020)
၆၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 2.0) (30-3-2020)
၆၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 1.1) (6-4-2020)
၆၃ 2019-nCoV လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဖြစ်ပွားသောဒေသမှ ပြန်လာသူများ၏ အတူနေမိသားစုဝင်များ လိုက်နာရန် (7-2-2020)
၆၄ 2019-nCoV လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဖြစ်ပွားသောဒေသမှ ပြန်လာသူများ ခွင့်သွားစဉ်/ အိမ်တွင် နေထိုင်စဉ် လိုက်နာရမည့် အချက်များ (22-3-2020)
၆၅ လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19 ရောဂါ သတိပေးအချက်အလက်များ (22-3-2020)
၆၆ Guideline for Home Quarantine အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (အနှစ်ချုပ်) (26-3-2020)
၆၇ သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ(26-3-2020)
၆၈ ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်း (Hotel/ Guest House Quarantine Centre) များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (26-3-2020)
၆၉ COVID-19 ရောဂါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အဆင့်အား ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရပ်တန့်နိုင်ရန် မိမိတို့ပြည်သူများအားလုံးမှ လတ်တလော ဦးစားပေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (29-3-2020)
၇၀ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် Hand Speaker/ Loud Speaker ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များ (အမှတ်စဉ် - ၁ မှ ၁၂) (26-3-2020)
၇၁ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် Hand Speaker/ Loud Speaker ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များ (အမှတ်စဉ် - ၁၄) (3-4-2020)
၇၂ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် Hand Speaker/ Loud Speaker ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များ (အမှတ်စဉ် - ၈) (8-4-2020)
၇၃ COVID-19 Hand-speakers Package (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် လက်ကိုင်စပီကာ/အသံချဲ့စက်များတွင် အသုံးပြုရန် အသံဖိုင်များ) (၂-၄-၂၀၂၀)
၇၄ COVID-19 ကာကွယ်ရေး တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့် အသံလွှင့်ချက်များ (၆-၄-၂၀၂၀)
၇၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1.0) (7-4-2020)
၇၆ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း (၁၄)ရက် ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (8-4-2020)
၇၇ အသွားအလာကန့်သတ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများ၌ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (quarantine) လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများထံအသိပေးပြောကြားခြင်း (9-4-2020)
၇၈ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း (၂၁)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (11-4-2020)
၇၉ COVID-19: Facility Quarantine (၂၁)ရက်နှင့် မိမိနေအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်ခြင်း Home Quarantine ကာလ(၇)ရက် ဆောင်ရွက်သွားရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း (11-4-2020)
၈၀ COVID-19: အဝတ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော နှာခေါင်းစည်း (Cloth Face Covering) နှင့် ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ (15-4-2020)
၈၁ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေး (Healthy Stay at Home) အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ (Version 1.1) (19-4-2020)
၈၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင်ဆောင်ရွက်ထားရမည့်အချက်များ (19-4-2020)
၈၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 3.0) Updated as of (19-4-2020)
၈၄ COVID-19: သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (Updated as of 20-4-2020)
၈၅ COVID-19: ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်း (Hotel/Guest House) Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (Updated as of 20-4-2020)
၈၆ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့်သူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ (အနှစ်ချုပ်) (လတ်တလောအခြေအနေအရ Diplomat and UN passport ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်သာ) (Guideline for Home Quarantine) Version (3.0) (Updated as of 20-4-2020)
၈၇ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ အဓိကသတင်းစကား(၁၀)ချက်(10 Key Messages) (17-4-2020)
၈၈ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ စျေးဆိုင်များ၊ စျေးများ၊ စျေးဝယ်သူများနှင့် စျေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (21-4-2020)
၈၉ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ (22-4-2020)
၉၀ ပြည်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာများ (24-4-2020)
၉၁ COVID-19: Quarantine ကာလ (၂၁) ရက် ပြည့်ပြီးနောက် ပိုမိုစိတ်ချရစေရန် နောက်ထပ် (၇) ရက်အတွင်း ဖော်ပြပါအချက်တွေကို သေသေချာချာလိုက်နာပါ။ (24-4-2020)
၉၂ COVID-19 ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာအချက်အလက်များ (တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ) (24-4-2020)
၉၃ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းနှင့် ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းတို့ကို လုံးဝ(လုံးဝ)ရှောင်ကြဉ်ပါ (28-4-2020)
၉၄ ပြည်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးများ (28-4-2020)
၉၅ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ
၉၆ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 မိမိကစကာကွယ်ပါ။ အဓိက သတင်းစကား (၁၀) ချက် (30-4-2020)
၉၇ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျဝတ်ဆင်ခြင်း (30-4-2020)
၉၈ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပေးအချက်အလက်များ (24.4.2020)
၉၉ COVID-19: နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း (Stay at Home) ကာလအတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ (ပိုစတာ) (4-5-2020)
၁၀၀ COVID-19: Infrared (Non-touch) အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းလမ်းညွှန် (4-5-2020)
၁၀၁ COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှော့ပင်းမောလ်နှင့် စူပါမားကတ်၊ ပါဆယ်ရောင်းချသည့်ဆိုင်များနှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ထားရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (4-5-2020)
၁၀၂ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (5-5-2020)
၁၀၃ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများတွင်တွေ့ရှိရသော ရောဂါလက္ခဏာများအား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန်ဖော်ပြခြင်း (9-5-2020)
၁၀၄ COVID-19 ရောဂါ နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များ၊ ရင်သွေးငယ်များ၏မိဘများနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အမေးများသည့် မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၀၅ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူသုံး ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်နှင့် အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၀၆ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလေးမိဘများနှင့် ကလေးများကို စောင့်ရှောက်နေသူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၀၇ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၀၈ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးလုပ်သား/ ဝန်ထမ်းများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၀၉ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသက် (၆၀) နှစ်နှင့် အထက်၊ ပင်ကိုယ်ရောဂါ ရှိနေသူများနှင့် ထိုသူများကို စောင့်ရှောက်သူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၁၀ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသွားအလာကန့်သတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ခံထားရသူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၁၁ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့များ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့် မန်နေဂျာများအတွက် သတင်းစကား (Version 1.0) (11-5-2020)
၁၁၂ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (12-5-2020)
၁၁၃ စားသောက်ဆိုင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (18-5-2020)
၁၁၄ COVID-19: စေတနာ့ဝန်ထမ်း သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ် (May 2020)
၁၁၅ (COVID-19)ကာလတွင် လူခန္ဓာကိုယ်အား တိုက်ရိုက်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့် အလုံခန်းငယ်များကို အသုံးပြု၍ ပိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း (Version 1.0) (19-5-2020)
၁၁၆ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားမှုသေဆုံးမှုမရှိစေရေး ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသူများအနေဖြင့် မဖြစ်မနေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ (24-5-2020)
၁၁၇ ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ (Version 1.0) (2-6-2020)
၁၁၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 2.0) (2-6-2020)
၁၁၉ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ အလုပ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော တောင်သူလယ်သမားများ နားနေချိန်နှင့် ထမင်းစားချိန်များတွင် စုဝေးစားသောက်မှုမပြုစေရေး လမ်းညွှန်ချက် (3-6-2020)
၁၂၀ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွာရန်တင်းစင်တာ မဟုတ်သည့် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက် (Version 1.0) (3-6-2020)
၁၂၁ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့် အာဟာရဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (Version 1.0) (5-6-2020)
၁၂၂ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (10-6-2020)
၁၂၃ အစားသောက်ဆိုင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်မျာ: (Version 1.1)(11.6.2020)
၁၂၄ COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက် (Version 1.0) (15-6-2020)
၁၂၅ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (15-6-2020)
၁၂၆ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 4.0) (26-6-2020)
၁၂၇ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 2.0) (2-6-2020)
၁၂၈ COVID-19 ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းမပေါ်ပေါက်စေရေး သတိပြုရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် .......................... မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူများသို့ ပန်ကြားချက် (19-8-2020)
၁၂၉ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရန် စစ်တွေမြို့နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုများ ရှိနေသော မြို့နယ်များ သို့/မှ ခရီးသွားလာမှုများရှိခဲ့ပါက သတင်းပေးပို့ကြပါရန် သတိပေး နှိုးဆော်ပန်ကြားချက် (25-8-2020)
၁၃၀ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့‌ နောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပြန်လာသူများကို ဆက်သွယ်ရာတွင် မဖြစ်မနေပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် သတိပေးနှိုးဆော်ချက် (2-9-2020)
၁၃၁ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (7-9-2020)
၁၃၂ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် - အပိုင်း (၁) (7-9-2020)
၁၃၃ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် - အပိုင်း (၂) (9-9-2020)
၁၃၄ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် စောင့်ကြည့်လူနာ(Person Under Investigation -PUI)များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ အနီးကပ်ထိတွေ့သူများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version-1.0) (15-9-2020)
၁၃၅ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများ ဆေးရုံမှ ဆင်းပြီးနောက် တိကျစွာလိုက်နာရန်အချက်များ (Version 1.0) (15-9-2020)
၁၃၆ အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း (၁၄) ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version- 2.0) (15-9-2020)
၁၃၇ အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်းသတ်မှတ်ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Facility Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ပြန်မည့်သူများနှင့်မိသားစုဝင်များ လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version-3.0) (20-9-2020)
၁၃၈ COVID-19 ကူးစက်မှုကို အမြန်ဆုံးလျှော့ချနိုင်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း (21-9-2020)
၁၃၉ ပြည်သူများသို့ အသိပေးခြင်း (၁) (22-9-2020)
၁၄၀ ပြည်သူများသို့ အသိပေးချက် (၂) (29-9-2020)
၁၄၁ အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်မောင်း/ ယာဉ်နောက်လိုက်များအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များ (Version 1.0) (3-10-2020)
၁၄၂ ကူးစက်ရောဂါကင်းဝေးဖို့၊ စနစ်တကျလက်ဆေးကြပါစို့ (8-10-2020)
၁၄၃ COVID-19 ရောဂါကုသရန် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း (၁၇-၁၀-၂၀၂၀)
၁၄၅ သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် (COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ဂါရဝပြုပါ (28-10-2020)
၁၄၆ "ကူးစက်ရောဂါကင်းဝေးဖို့၊ စနစ်တကျလက်ဆေးကြပါစို့" (6-11-2020)
၁၄၇ "ဆန္ဒမဲပေးအပြီး လက်သန်းမင်တို့ရာတွင် သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ" (6-11-2020)
၁၄၈ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) မဖြစ်မနေ စနစ်တကျတပ်ဆင်ကြပါစို့ (14-11-2020)
၁၄၉ “မျက်နှာနှင့် နှာခေါင်းစည်း မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက်” (18-11-2020)
၁၅၀ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိစေရေး ပြည်သူများ နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး ပန်ကြားချက် (19-11-2020)
၁၅၁ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အကျဉ်းစခန်းများတွင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကျဉ်းကျသူများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ (19-11-2020)
၁၅၂ COVID-19 ရောဂါ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် မြို့နယ်/ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အိမ်ဆိုင်များနှင့် လမ်းဘေးစျေးဆိုင်များ တိကျစွာလိုက်နာရမည့် အချက်များ (21-11-2020)
၁ Hospital Infection Control Guidelines (2016)
၂ ​​ ​ Laboratory Request Form for Novel Coronavirus (nCoV) Suspected Cases Version2(29-1-2020)
၃ ​ Novel Coronavirus (2019-nCoV) ရောဂါ သံသယလူနာထံမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ရယူရန် လမ်းညွှန်ချက် (Laboratory Sample Collection Guideline) Version2(29-1-2020)
၄ Novel Coronavirus (2019-nCoV) ပိုးမွှားသန့်စင်ရေး (Decontamination & Disinfection) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၁-၂-၂၀၂၀)
၅ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (၁၁-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး (၁၅/၂၀၂၀) တွင် ညွန်ကြားခဲ့သည်)
၆ SOPs for Pneumonia Surveillance in International Airport/Seaport, Ground Crossing & Hospitals/Clinics (26-2-2020)
၇ ဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Biosafety & Biosecurity Protective Procedures for Mekong Basin Cross-border) (Dec 2019)
၈ Patient Record Form for Suspected 2019-nCoV (4-2-2020)
၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံအလုပ်ရုံများသို့ လမ်းညွှန်ချက် (19-3-2020)
၁၀ Case management of COVID-19 Disease at District/Township hospitals without an ICU (Version 1) (26-3-2020)
၁၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 2.0) (30-3-2020)
၁၂ COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version -1)(24-3-2020)
၁၃ COVID- 19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေသည့်ကာလအတွင်း သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် နာတာရှည်ရောဂါ (ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ စသည်…)ရှိသူများအတွက် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရှင်များလိုက်နာရမည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version - 1.0)(6-4-2020)
၁၄ Pediatric Clinical Management Guidlines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 2) (6-4-2020)
၁၅ COVID-19: ပြည်သူလူထု၏ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှုဖြင့် သတ်မှတ်နေရာ အဆောက်အဦများတွင်ထားရှိပြီး အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း အစီအစဉ်(Community Based Facility Quarantine) နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1) (၂၆-၃-၂၀၂၀)
၁၆ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် နေရာများအား ဆန်းစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း (Version 1.1) (၃၁-၃-၂၀၂၀)
၁၇ Clinical Management Guideline for COVID-19 Infection in Pregnancy (Version 2) (9-4-2020)
၁၈ Discharge Criteria for COVID-19 (Version 2) (13-4-2020)
၁၉ Clinical Management Guidlines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 6) (14-4-2020)
၂၀ Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 6) (14-4-2020)
၂၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင်ဆောင်ရွက်ထားရမည့်အချက်များ (19-4-2020)
၂၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 3.0) Updated as of (19-4-2020)
၂၃ New Yangon General Hospital COVID-19 Management Protocol (A)
၂၄ New Yangon General Hospital COVID-19 Management Protocol (B)
၂၅ North Okkalapa General and Teaching Hospital Standard Operating procedure Fever Clinic
၂၆ COVID-19: ပြင်ပလူနာဌာန Out Patient Deapartment (OPD)/ အရေးပေါ်ကုသမှုဌာန (Emergency Department) COVID-19 ရောဂါအတွက် Hopital-based Fever Clinic/Fever Corner ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (20-4-2020)
၂၇ COVID-19 Guidelines for Community Fever Clinic Version 01-2020 (22-4-2020)
၂၈ COVID-19: ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ (24-4-2020)
၂၉ Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 07) (28-4-2020)
၃၀ COVID-19 ရောဂါ သံသယလူနာများနှင့် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာများအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1.0) (11-5-2020)
၃၁ SOP on Resumption of Immunization Services during and after COVID-19 outbreak
၃၂ COVID-19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
၃၃ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၌ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် Checklists (1-7-2020)
၃၄ COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့် ပတ်သက်၍ Personal Protective Equipment ဝတ်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 2) (1-7-2020)
၃၅ COVID-19 ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံများတွင် ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 4) (1-7-2020)
၃၆ Guideline on Utilization of Operation Theatre during COVID-19 Pandemic (June, 2020) Loading Docs...
၃၇ ICU Management Guideline of Acute Hypoxemic Respiratory Failure and ARDS when COVID-19 Infection is suspected (Version 3) (24-6-2020)
၃၈ Infection Prevention and Control in ICU when COVID-19 is Suspected (Version 3) (24-6-2020)
၃၉ COVID-19 Guidelines for Community Fever Clinic Version 02-2020 (17-7-2020)
၄၀ Clinical Management Guidlines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 7) (23-7-2020)
၄၁ Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 08) (23-7-2020)
၄၂ Clinical Management Guidelines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 08) (25-8-2020)
၄၃ Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 9) (25-8-2020)
၄၄ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ထုပ်ပိုးခြင်း နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
၄၅ အာခေါင်တို့ပတ် (Oropharyngeal Swab) ဓါတ်ခွဲနမူနာ နှင့် နှာခေါင်းတို့ပတ် (Nasopharyngeal Swab) ဓာတ်ခွဲနမူနာ ယူခြင်း
၄၆ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE ချွတ်ခြင်း
၄၇ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE ဝတ်ဆင်ခြင်း
၄၈ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံအပြည့်ချွတ်ခြင်း
၄၉ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံပြည့် ဝတ်ဆင်ခြင်း
၅၀ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရန် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းခရီးသွားလာမှုများရှိခဲ့ပါက မဖြစ်မနေသတင်းပေးပို့ကြပါရန် သတိပေးနှိုးဆော်ချက် (28-8-22)
၅၁ COVID-19 လူနာများ ဆေးရုံဆင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များ (Discharge Criteria Version – 3) (7-9-2020)
၅၂ COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (7-9-2020)
၅၃ COVID-19 လူနာများ ဆေးရုံဆင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များ (Discharge Criteria Version – 5) (20-9-2020)
၅၄ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (20-9-2020)
၅၅ Consensus for Management Diabetes Mellitus among Persons with COVID-19 in Myanmar (29-9-2020)
၅၆ Standard Q COVID-19 Antigen (RDT) Test ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version - 2) (3-10-2020)
၅၇ Standard Q COVID-19 Antigen (RDT) Test ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version-3) (10-11-2020)
၅၈ Discharge Criteria for COVID-19 confirmed patients (as of 10-10-2020) (Version-6) (11-10-2020)
၅၉ COVID-19 RDT Antigen ဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 01) (15-10-2020)
၆၀ COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (10-11-2020)
၆၁ RECOMMENDEE GUIDELINES FOR SAFE SURGERY IN COVID 19 PANDEMIC ERA (Version 01) (14-8-2020)
၆၂ Supplementary Recommendations for Safe Surgery in COVID 19 Pandemic Era (Version 01.1) (26-10-2020)
၆၃ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အကျဉ်းစခန်းများတွင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကျဉ်းကျသူများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ (19-11-2020)
စဉ် မိမိဖတ်ရှုလိုသည့် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-11-2020, 4:00 PM)
၂ “ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (ဆဋ္ဌမပတ်အစီအစဉ်)” (1-11-2020)
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-11-2020, 8:00 PM)
၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-11-2020, 5:30 PM)
၅ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၈:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-11-2020, 8:00 PM)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-11-2020, 3:00 PM)
၈ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-11-2020, 8:00 PM)
၁၀ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လက်ခံတွေ့ဆုံ (3-11-2020)
၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-11-2020, 2:00 PM)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-11-2020, 8:00 PM)
၁၃ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပရဟိတအသင်းများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုတင်ပြခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (4-11-2020)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-11-2020, 6:00 PM)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-11-2020, 8:00 PM)
၁၆ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် သုတေသနများမှ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ ဆရာဝန်များထံသို့ အသိပေးဖြန့်ဝေခြင်း မွမ်းမံသင်တန်းသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (5-11-2020)
၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-11-2020, 4:00 PM)
၁၈ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၄၉) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၁၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-11-2020, 8:00 PM)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-11-2020, 6:00 PM)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-11-2020, 8:00 PM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-11-2020, 4:30 PM)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-11-2020, 8:00 PM)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-11-2020, 3:30 PM)
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-11-2020, 8:00 PM)
၂၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-11-2020, 4:00 PM)
၂၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၉-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၂၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-11-2020, 8:00 PM)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-11-2020, 5:00 PM)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-11-2020, 8:00 PM)
၃၁ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ရရှိပါကစနစ်တကျ ထိုးနှံပေးနိုင်ရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှု ဗဟိုအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (11-11-2020)
၃၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-11-2020, 3:30PM)
၃၃ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၂:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၃၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-11-20, 8:00 PM)
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-11-2020, 8:00 PM)
၃၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-11-2020, 3:00 PM)
၃၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၄၄) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-11-2020, 8:00 PM)
၃၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက် (15-11-2020)
၄၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-11-2020, 5:00 PM)
၄၁ “ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (အဋ္ဌမပတ်အစီအစဉ်)” (15-11-2020)
၄၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-11-2020, 8:00 PM)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-11-2020, 5:00 PM)
၄၄ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၀၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-11-2020, 8:00 PM)
၄၆ COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ရှေ့မျှော်မှန်းတွက်ဆ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (16-11-2020)
၄၇ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ASEAN – Korea Cooperation Fund (AKCF) ဖြင့် COVID-19 Antigen Test Kits များ လှူဒါန်းပေးအပ်မှုအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (16-11-2020)
၄၈ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စျေးများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေး (Mask & Face Shield Campaign) နှင့် ပြုမှုပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ‌ဆောင်ရွက် (17-11-2020)
၄၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-11-2020, 4:00 PM)
၅၀ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀)နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၅၁ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက် (17-11-2020)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-11-2020, 8:00 PM)
၅၃ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက် (18-11-2020)
၅၄ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စျေးများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေး (Mask & Face Shield Campaign) နှင့် ပြုမှုပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် (18-11-2020)
၅၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-11-2020, 4:30 PM)
၅၆ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ် ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် (18-11-2020)
၅၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-11-2020, 8:00 PM)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-11-2020, 4:30 PM)
၅၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-11-2020, 8:00 PM)
၆၀ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေးဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် (20-11-2020)
၆၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-11-2020, 4:00 PM)
၆၂ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ/ နယ်မြေ အသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား သေဆုံးမှုအခြေအနေ (WHO ၏ (၁၉-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၄၃) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၆၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-11-2020, 8:00 PM)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-11-2020, 4:00 PM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-11-2020, 8:00 PM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-11-2020, 4:00 PM)
၆၇ “ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (နဝမပတ်အစီအစဉ်)” (22-11-2020)
၆၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-11-2020, 8:00 PM)
၆၉ ကရင်ပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေး ဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် (23-11-2020)
၇၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-11-2020, 5:00 PM)
၇၁ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား သေဆုံးမှုအခြေအနေ (23-11-2020)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-11-2020, 8:00 PM)
၇၃ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (23-11-2020)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-11-2020, 5:30 PM)
၇၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၌ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေးဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက် (24-11-2020)
၇၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-11-2020, 8:00 PM)
၇၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-11-2020, 4:00 PM)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-11-2020, 8:00 PM)
၇၉ မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စီမံချက်အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လုပ်ငန်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (25-11-2020)
၈၀ COVID-19 ဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-11-2020, 5:00PM)
၈၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-11-2020, 8:00 PM)
၈၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-11-2020, 4:00 PM)
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-11-2020, 8:00 PM)
၈၄ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် COVID-19 ဖြစ်ပွားကူးစက်မှုအခြေအနေနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသော မြို့နယ်များအားလုံး၌ ဆောင်ရွက်နေသော ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေးလူထုလှုပ်ရှား စီမံချက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအားတင်ပြဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (27-11-2020)
၈၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-11-2020, 5:00 PM)
၈၆ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား သေဆုံးမှုအခြေအနေ (28-11-2020)
၈၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-11-2020, 8:00 PM)
၈၈ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများနှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံတုံ့ပြန်မှု အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးခြင်းသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (28-11-2020)
၈၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-11-2020, 4:00 PM)
၉၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-11-2020, 8:00 PM)
၉၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-11-2020, 4:00 PM)
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-10-2020, 5:30 PM)
၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-10-2020, 8:00 PM)
၃ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Tropical Health and Education Trust (THET) အဖွဲ့၏ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြား (1-10-2020)
၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-10-2020, 6:00 PM)
၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-10-2020, 8:00 PM)
၆ COVID-19 လူနာများအတွက် ကုသရေးလုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကထိက (ဆေးပညာ)/ အထူးကုဆရာဝန်များ၊ အထူးကုလက်ထောက်ဆရာဝန်၊ လက်ထောက်ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုဆရာမကြီးများ၊ အထက်တန်းသူနာပြုများ၊ သူနာပြုများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (2-10-2020)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-10-2020, 5:00 PM)
၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-10-2020, 8:00 PM)
၉ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၆) ခုရှိ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အားပေးစကားပြောကြား၍ အကြံပြုချက်များရယူ (3-10-2020)
၁၀ “ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (ဒုတိယအပတ်အစီအစဉ်)” (4-10-2020)
၁၁ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို အမြန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ပြည်သူများ နိုင်ငံသားကောင်းပီသစွာဖြင့် အနည်းဆုံး မဖြစ်မနေ လုပ်ရမည့် အချက်တစ်ချက်မှာ (4-10-2020)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-10-2020, 7:00 PM)
၁၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-10-2020, 8:00 PM)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-10-2020, 4:30 PM)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-10-2020, 8:00 PM)
၁၆ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁၃/၂၀၂၀ (5-10-2020)
၁၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (5-10-2020)
၁၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-10-2020, 6:00PM)
၁၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-10-2020, 8:00 PM)
၂၀ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၆) ခုရှိ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေခံကျန်းမာရေး ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အားပေးစကား ပြောကြား၍ အကြံပြုချက်များရယူ (6-10-2020)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-10-2020, 5:30 PM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-10-2020, 8:00 PM)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-10-2020, 5:00 PM)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-10-2020, 8:00 PM)
၂၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (8-10-2020)
၂၆ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၂၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-10-2020, 5:30 PM)
၂၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-10-2020, 8:00 PM)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-10-2020, 5:00 PM)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-10-2020, 8:00 PM)
၃၁ မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (၁၈) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (10-10-2020)
၃၂ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၂၄ /၂၀၂၀ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်)
၃၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-10-2020, 6:30 PM)
၃၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-10-2020, 8:00 PM)
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-10-2020, 5:30 PM)
၃၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-10-2020, 8:00 PM)
၃၇ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ “မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျန်းမာရေးပညာရှင်ဝန်ထမ်းများအား ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအားပေးစကား” (13-10-2020)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-10-2020, 5:00 PM)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-10-2020, 8:00 PM)
၄၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-10-2020, 6:30 PM)
၄၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-10-2020, 8:00 PM)
၄၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (14-10-2020)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-10-2020, 6:30 PM)
၄၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-10-2020, 8:00 PM)
၄၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် လူနာများနှင့် COVID-19 ကုသရေးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ကျနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများ သေချာစေရေး ဆွေးနွေး (15-10-2020)
၄၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-10-2020, 5:30 PM)
၄၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၈၂)နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၃၀) အချိန်အထိထုတ်ပြန်ချက်)
၄၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-10-2020, 8:00 PM)
၄၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် COVID-19 ကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု အပတ်စဉ် အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (16-10-2020)
၅၀ COVID-19 ရောဂါကုသရန် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း (၁၇-၁၀-၂၀၂၀)
၅၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-10-2020, 5:00 PM)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-10-2020, 8:00 PM)
၅၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးသည့် Rapid Antigen Diagnostic Test Kit များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (17-10-2020)
၅၄ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀)နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၀:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၅၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-10-2020, 5:00 PM)
၅၆ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-10-2020, 8:00 PM)
၅၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၁၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-10-2020, 5:30 PM)
၅၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-10-2020, 8:00 PM)
၆၀ ဖားကန့်မြို့နယ်နှင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်တို့တွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း ကြေညာချက် (19-10-2020)
၆၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-10-2020, 8:00 PM)
၆၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-10-2020, 4:30 PM)
၆၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-10-2020, 8:00 PM)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-10-2020,6:00 PM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-10-2020, 8:00 PM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-10-2020, 6:00 PM)
၆၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀)နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၆၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-10-2020, 8:00 PM)
၆၉ အကျဉ်းထောင်များတွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အကျဉ်းထောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (23-10-2020)
၇၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-10-2020, 5:30 PM)
၇၁ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၃-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၀၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-10-2020, 8:00 PM)
၇၃ “ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (ပဉ္စမအပတ်အစီအစဉ်)” (25-10-2020)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-10-2020, 7:30 PM)
၇၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-10-2020, 8:00 PM)
၇၆ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ အပတ်စဉ်တင်ပြဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (25-10-2020)
၇၇ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ် ၁၃၅/၂၀၂၀ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)
၇၈ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ် ၁၃၇/၂၀၂၀ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)
၇၉ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ် ၁၃၆/၂၀၂၀ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)
၈၀ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမိန့်အမှတ် ၁၃၄/၂၀၂၀ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)
၈၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-10-2020, 5:30 PM)
၈၂ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၄၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-10-2020, 8:00 PM)
၈၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (26-10-2020)
၈၅ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၃၆) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၈၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-10-2020, 5:30 PM)
၈၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-10-2020, 8:00 PM)
၈၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-10-2020, 6:30 PM)
၈၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-10-2020, 8:00 PM)
၉၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-10-2020, 8:00 PM)
၉၁ နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် - ၁,၀၀၀) မှ COVID-19 လူနာဆောင်များနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ထပ်မံလိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် (28-10-2020)
၉၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-10-2020, 5:30 PM)
၉၃ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀)နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၉၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-10-2020, 8:00 PM)
၉၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-10-2020, 7:00 PM)
၉၆ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀)နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၉-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၄၅) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၉၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-10-2020, 8:00 PM)
၉၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-10-2020, 6:00 PM)
၉၉ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ (၉၀) နိုင်ငံ၏အခြေအနေ (WHO ၏ (၃၀-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၀၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၁၀၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-10-2020, 8:00 PM)
၁ UNOPS အဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးမှုအခြေအနေများနှင့် Global Fund ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် တီဘီ၊ ခုခံကျ/ကာလသားနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် (၂၀၂၁-၂၀၂၃) ခုနှစ်အထိ သဘောတူညီချက်လက်မှတ် ရေးထိုးရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများ ဆွေးနွေး (30-9-2020)
၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-9-2020, 8:00 PM)
၃ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-9-2020, 4:30 PM)
၅ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ရှိ အားကစားကွင်းနှင့် အားကစားရုံများတွင် (COVID-19) ကာလအတွင်း ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (Quarantine) ထားရှိမှု အခြေအနေ (29-9-2020)
၆ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (29-9-2020)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-9-2020, 8:00 PM)
၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-9-2020, 5:30 PM)
၉ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံနှင့် အာရှနိုင်ငံအချို့၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၈-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၀:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၁၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-9-2020, 8:00 PM)
၁၁ COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်ချေများသော အပြုအမူများ (28-9-2020)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-9-2020, 5:00 PM)
၁၃ “ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ်” (28-9-2020)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-9-2020, 8:00 PM)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-9-2020, 4:30 PM)
၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ ကုသရေးပါမောက္ခများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် COVID-19 လူနာများ ကုသရေးနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် (26-9-2020)
၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-9-2020, 8:00 PM)
၁၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-9-2020, 3:00 PM)
၁၉ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁၀/ ၂၀၂၀ (25-9-2020)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-9-2020, 8:00 PM)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-9-2020, 5:00 PM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-9-2020, 8:00 AM)
၂၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် (24-9-2020)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-9-2020, 8:00 PM)
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-9-2020, 6:30 PM)
၂၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-9-2020, 8:00 AM)
၂၇ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် (23-9-2020)
၂၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-9-2020, 8:00 PM)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-9-2020, 4:30 PM)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-9-2020, 8:00 AM)
၃၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-9-2020, 8:00 PM)
၃၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-9-2020, 4:30 PM)
၃၃ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၁၅)နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၁:၀၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၃၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-9-2020, 8:00 AM)
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-9-2020, 8:00 PM)
၃၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-9-2020, 4:30 PM)
၃၇ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံနှင့် အာရှနိုင်ငံအချို့၏ အခြေအနေ (WHO ၏ (၂၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်)
၃၈ COVID-19 ကူးစက်မှုကို အမြန်ဆုံးလျှော့ချနိုင်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း (21-9-2020)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-9-2020, 8:00 AM)
၄၀ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၀၇/ ၂၀၂၀ (20-9-2020)
၄၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-9-2020, 8:00 PM)
၄၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-9-2020, 5:30 PM)
၄၃ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ ( WHO ၏ (၁၉-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၃၀) အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက် ) (20-9-2020)
၄၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-9-2020, 8:00 AM)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-9-2020, 8:00 PM)
၄၆ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၈-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-9-2020, 4:00 PM)
၄၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-9-2020, 8:00 AM)
၄၉ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (18-9-2020)
၅၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-9-2020, 8:00 PM)
၅၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-9-2020, 4:00 PM)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-9-2020, 8:00 AM)
၅၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-9-2020, 8:00 PM)
၅၄ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အလှူရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (17-9-2020)
၅၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-9-2020, 3:00 PM)
၅၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-9-2020, 8:00 AM)
၅၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-9-2020, 8:00 PM)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-9-2020, 5:00 PM)
၅၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-9-2020, 8:00 AM)
၆၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-9-2020, 8:00 PM)
၆၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-9-2020, 3:00 PM)
၆၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-9-2020, 8:00 AM)
၆၃ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ ထပ်မံသွားရောက်မည် (14-9-2020)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-9-2020, 8:00 PM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-9-2020, 3:30 PM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-9-2020, 8:00 AM)
၆၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-9-2020, 8:00 PM)
၆၈ ရုံး/ဌာနများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရန် ကြီးကြပ်သူများ/ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အချင်းချင်း သတိပေးပြောကြားရမည့် အချက်များ (အနည်းဆုံး တစ်နေ့ (၃)ကြိမ် ပြောကြားပေးပါရန်) (13-9-2020)
၆၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-9-2020, 4:30 PM)
၇၀ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၇၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-9-2020, 8:00 AM)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-9-2020, 8:00 PM)
၇၃ COVID- 19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့မြေပြင်၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား အထူးအသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ခြင်း (12-9-2020)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-9-2020, 12:00 PM)
၇၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-9-2020, 8:00 AM)
၇၆ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (11-9-2020)
၇၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-9-2020, 8:00 PM)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-9-2020, 6:30 PM)
၇၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-9-2020, 8:00 AM)
၈၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-9-2020, 8:00 PM)
၈၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-9-2020, 5:30 PM)
၈၂ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၉-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-9-2020, 8:00 AM)
၈၄ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၀၂/ ၂၀၂၀ (9-9-2020)
၈၅ တစ်နေ့တခြားကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာသည့် COVID-19 ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (9-9-2020)
၈၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-9-2020, 8:00 PM)
၈၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-9-2020, 3:30 PM)
၈၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-9-2020, 8:00 AM)
၈၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-9-2020, 8:00 PM)
၉၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-9-2020, 2:00 PM)
၉၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-9-2020, 8:00 AM)
၉၂ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သာမက အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၌လည်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာသည့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (7-9-2020)
၉၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-9-2020, 8:00 PM)
၉၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-9-2020, 1:30 PM)
၉၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-9-2020, 8:00 AM)
၉၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-9-2020, 8:00 PM)
၉၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-9-2020, 1:00 PM)
၉၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-9-2020, 8:30 AM)
၉၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-9-2020, 8:00 PM)
၁၀၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-9-2020, 12:15 PM)
၁၀၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-9-2020, 8:00 AM)
၁၀၂ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနထံမှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် (COVID-19 Economic Relief Plan) ဖြင့် ဝယ်ယူသော လူနာတင်ယာဉ် (၁၂) စီးအနက် ပထမအသုတ် (၄) စီးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ပြုလုပ်
၁၀၃ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ နေ့စဉ်ဆန်းစစ်သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
၁၀၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-9-2020, 8:00 PM)
၁၀၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-9-2020, 11:00 AM)
၁၀၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-9-2020, 8:00 AM)
၁၀၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-9-2020, 8:00 PM)
၁၀၈ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ နေ့စဉ်ဆန်းစစ်သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် (3-9-2020)
၁၀၉ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ (3-9-2020)
၁၁၀ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် "မိမိဆန္ဒအလျောက်" တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိ (3-9-2020)
၁၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-9-2020, 12:00 PM)
၁၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-9-2020, 8:00 AM)
၁၁၃ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအား ခြုံငုံသုံးသပ်ကာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြ (2-9-2020)
၁၁၄ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ နေ့စဉ်ဆန်းစစ်သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲ (2-9-2020)
၁၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-9-2020, 8:00 PM)
၁၁၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-9-2020, 11:00 AM)
၁၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-9-2020, 8:00 AM)
၁၁၈ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၁၀၀/ ၂၀၂၀ (1-9-2020)
၁၁၉ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သာမက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အားလုံး၌ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် Videoconferencing စနစ်ဖြင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ် (1-9-2020)
၁၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-9-2020, 8:00 PM)
၁၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-9-2020, 1:00 PM)
၁၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-9-2020, 8:00 AM)
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-8-2020, 8:00 PM)
၂ COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-8-2020, 8:00 AM)
၄ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (30-8-2020)
၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-8-2020, 8:00 PM)
၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-8-2020, 8:00 AM)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-8-2020, 11:00 PM)
၈ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 ရောဂါ အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်ရေး ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ MNA လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိ (29-8-2020)
၉ (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လိုက်ပါခဲ့သူများစာရင်း (29-8-2020)
၁၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-8-2020, 8:00 PM)
၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-8-2020, 8:00 AM)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-8-2020, 8:00 PM)
၁၃ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လျင်မြန်စွာကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 အား ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်သန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟို၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတာဝန်ရှိသူများနှင့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များ Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေး (28-8-2020)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-8-2020, 9:30 AM)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-8-2020, 8:00 AM)
၁၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-8-2020, 8:00 PM)
၁၇ COVID-19 ကပ်ရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် "မိမိဆန္ဒအလျောက်" ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စစ်တွေမြို့သို့ ထပ်မံရောက်ရှိ (27-8-2020)
၁၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-8-2020, 8:00 AM)
၁၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၉၇ /၂၀၂၀ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် (26-8-2020)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-8-2020, 8:00 PM)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-8-2020, 2:30 PM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-8-2020, 8:00 AM)
၂၃ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲမှ ဘက်စုံဆန်းစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (25-8-2020)
၂၄ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်း များပြားနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအစည်းအဝေးပြုလုပ် (25-8-2020)
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-8-2020, 9:40 PM)
၂၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-8-2020, 8:30 PM)
၂၇ ဗဟိုကူးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲ (Central Epidemiology Unit) မှ ဗဟိုကွင်းဆင်းအဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ (25-8-2020)
၂၈ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့တွင် "မိမိဆန္ဒအလျောက်" ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိ (25-8-2020)
၂၉ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကို Video Conference စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပ (25-8-2020)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-8-2020, 8:00 AM)
၃၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-8-2020, 8:00 PM)
၃၂ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဆောင်ရွက်နေသည့် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအသုံးပြုရန် လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (24-8-2020)
၃၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-8-2020, 8:00 AM)
၃၄ COVID-19 လူနာများအားကုသရန်အတွက် သွေးရည်ကြည်များလှူဒါန်းခဲ့သည့် အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်ဂုဏ်ပြု (23-8-2020)
၃၅ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ "မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည့် SARS-COV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏မျိုးဗီဇတစ်ခုလုံးကို လေ့လာသော သုတေသန" ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ကာကွယ်ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ရှင်းလင်းတင်ပြ (23-8-2020)
၃၆ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (23-8-2020)
၃၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-8-2020, 8:00 PM)
၃၈ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် "မိမိဆန္ဒအလျောက်" ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိ (23-8-2020)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-8-2020, 8:00 AM)
၄၀ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများဆွေးနွေးပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအတွက် ဆေးရုံများ၌ ဘက်စုံအသင့် ပြင်ဆင်ထားရှိနိုင်ရေးနှင့် စနစ်တကျ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စားပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ် (22-8-2020)
၄၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-8-2020, 8:00 PM)
၄၂ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု မြန်ဆန်နေသည့် COVID-19 (22-8-2020)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-8-2020, 8:00 AM)
၄၄ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါ ပိုးတွေ့လူနာများ တွေ့ရှိမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ (21-8-2020)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-8-2020, 8:00 PM)
၄၆ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (21-8-2020)
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-8-2020, 8:00 AM)
၄၈ ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတက်ရောက် (20-8-2020)
၄၉ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၉၃/ ၂၀၂၀ (20-8-2020)
၅၀ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (20-8-2020)
၅၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-8-2020, 8:00 PM)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-8-2020, 8:00 AM)
၅၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-8-2020, 8:00 PM)
၅၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-8-2020, 8:00 AM)
၅၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-8-2020, 8:00 PM)
၅၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-8-2020, 8:00 AM)
၅၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-8-2020, 8:00 PM)
၅၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၄-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ (17-8-2020)
၅၉ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (17-8-2020)
၆၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-8-2020, 8:00 AM)
၆၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-8-2020, 8:00 PM)
၆၂ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်း (15-8-2020)
၆၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-8-2020, 8:00 AM)
၆၄ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (14-8-2020)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-8-2020, 8:00 PM)
၆၆ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (13-8-2020)
၆၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-8-2020, 8:00 AM)
၆၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-8-2020, 8:00 PM)
၆၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-8-2020, 8:00 AM)
၇၀ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (11-8-2020)
၇၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-8-20, 8:00 PM)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-8-2020, 8:00 AM)
၇၃ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (10-8-2020)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-8-2020, 8:00 PM)
၇၅ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ တာဝန်ရှိသူများက COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ရှင်းလင်းတင်ပြ (9-8-2020)
၇၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-8-2020, 8:00 PM)
၇၇ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (9-8-2020)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-8-2020, 8:00 AM)
၇၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-8-2020, 8:00 PM)
၈၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-8-2020, 8:00 AM)
၈၁ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (7-8-2020)
၈၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-8-2020, 8:00 PM)
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-8-2020, 8:00 AM)
၈၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-8-2020, 8:00 PM)
၈၅ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (6-8-2020)
၈၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-8-2020, 8:00 AM)
၈၇ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (5-8-2020)
၈၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-8-2020, 8:00 PM)
၈၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-8-2020, 8:00 AM)
၉၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-8-2020, 8:00 PM)
၉၁ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (4-8-2020)
၉၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-8-2020, 8:00 AM)
၉၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-8-2020, 8:00 PM)
၉၄ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (3-8-2020)
၉၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-8-2020, 8:00 AM)
၉၆ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (2-8-2020)
၉၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-8-2020, 8:00 PM)
၉၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-8-2020, 8:00 AM)
၉၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-8-2020, 8:00 PM
၁၀၀ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (1-8-2020)
၁၀၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-8-2020, 8:00 AM)
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-7-2020, 8:00 PM)
၂ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (31-7-2020)
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-7-2020, 8:00 AM)
၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-7-2020, 8:00 PM)
၅ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (30-7-2020)
၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-7-2020, 8:00 AM)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-7-2020, 8:00 PM)
၈ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (29-7-2020)
၉ ယနေ့ (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ (The Mirror Daily) သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် - "COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေအား ယေဘုယျ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၁၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-7-2020, 8:00 AM
၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-7-2020, 8:00 PM)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-7-2020, 8:00 AM)
၁၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-7-2020, 8:00 PM)
၁၄ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (27-7-2020)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-7-2020, 8:00 AM)
၁၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-7-2020, 8:00 PM)
၁၇ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (26-7-2020)
၁၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-7-2020, 8:00 AM)
၁၉ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (25-7-2020)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-7-2020, 8:00 PM)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-7-2020, 8:00 AM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-7-2020, 8:00 PM)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-7-2020, 8:00 AM)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-7-2020, 8:00 PM)
၂၅ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (23-7-2020)
၂၆ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပညာသင်၊ ကြိုတင်တားဆီး COVID-19 (22-7-2020)
၂၇ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်မှုများပြုလုပ်ရန်ရာ၌ အသုံးပြုရန် လက်ကိုင်အသံချဲ့စက် (၅,၀၀၀) ခုအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ် (22-7-2020)
၂၈ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေသည့် အခြေအနေများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရှောင်တခင်သွားရောက်ကြည့်ရှု (22-7-2020)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-7-2020, 8:00 PM)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-7-2020, 8:00 AM)
၃၁ COVID-19 ဘေးကင်းစွာဖြင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် (21-7-2020)
၃၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-7-2020, 8:00 PM)
၃၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အစီရင်ခံစာနှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ်များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ တင်ပြပေးအပ် (21-7-2020)
၃၄ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (21-7-2020)
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-7-2020, 8:00 AM)
၃၆ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (20-7-2020)
၃၇ COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (20-7-2020)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-7-2020, 8:00 PM)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-7-2020, 8:00 AM)
၄၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-7-2020, 8:00 PM)
၄၁ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (19-7-2020)
၄၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-7-2020, 8:00 AM)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-7-2020, 8:00 PM)
၄၄ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ဆင်ပါ (18-7-2020)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-7-2020, 8:00 AM)
၄၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-7-2020, 8:00 PM)
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-7-2020, 8:00 AM)
၄၈ အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (16-7-2020)
၄၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-7-2020, 8:00 PM)
၅၀ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (16-7-2020)
၅၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-7-2020, 8:00 AM)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-7-2020, 8:00 PM)
၅၃ အခြေခံပညာကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆိုင်ရာ ဗဟိုအဆင့်ညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (14-7-2020)
၅၄ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ရှေ့တန်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအမျိုးသားနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာ တည်ခင်းခြင်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (14-7-2020)
၅၅ COVID-19 ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်မှု ပမာဏနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားလာစေရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (14-7-2020)
၅၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-7-2020, 8:00 PM)
၅၇ ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (14-7-2020)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-7-2020, 8:00 AM)
၅၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-7-2020, 8:00 PM)
၆၀ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၆၁ ပြည်သူများ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (13-7-20)
၆၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-7-2020, 8:00 PM)
၆၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-7-2020, 8:00 AM)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-7-2020, 8:00 PM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-7-2020, 8:00 AM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-7-2020, 8:00 PM)
၆၇ ပြည်သူများ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (10-7-2020)
၆၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-7-2020, 8:00 AM)
၆၉ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ၊ စိန်ခေါ်မှုနှင့် အခက်အခဲများ၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစားပေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (9-7-2020)
၇၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-7-2020, 8:00 PM)
၇၁ စျေး၊ လမ်း၊ အဆောက်အဦအတွင်းနှင့် လူပေါ်သို့ ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးဖျန်းခြင်းက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရာတွင် အကျိုးရှိပါသလား? (9-7-2020)
၇၂ ပြည်သူများ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (9-7-2020)
၇၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-7-2020, 8:00 AM)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-7-2020, 8:00 PM)
၇၅ ပြည်သူများ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့် (8-7-2020)
၇၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-7-2020, 8:00 AM)
၇၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-7-2020, 8:00 PM)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-7-2020, 8:00 AM)
၇၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-7-2020, 8:00 PM)
၈၀ COVID-19 လူနာအမှတ် C-311 နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (6-7-2020)
၈၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-7-2020, 8:00 AM)
၈၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-7-2020, 8:00 PM)
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-7-2020, 8:00 AM)
၈၄ COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်း မဖြစ်စေရန် (4-7-2020)
၈၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-7-2020, 8:00 PM)
၈၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-7-2020, 8:00 AM)
၈၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-7-2020, 8:00 PM)
၈၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-7-2020, 8:00 AM)
၈၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-7-2020, 8:00 PM
၉၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-7-2020, 8:00 AM)
၉၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-7-2020, 8:00 PM)
၉၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-7-2020, 8:00 AM)
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-6-2020, 8:00 PM)
၂ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၇၂/၂၀၂၀ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက် (30-6-2020)
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-6-2020, 8:00 AM)
၄ COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် Clinical Management Committee ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-6-2020, 8:00 PM)
၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-6-2020, 8:00 AM)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-6-2020, 8:00 PM)
၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-6-2020, 8:00 AM)
၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-6-2020, 8:00 PM)
၁၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-6-2020, 8:00 AM)
၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-6-2020, 8:00 PM)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-6-2020, 8:00 AM)
၁၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-6-2020, 8:00 PM)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-6-2020, 8:00 AM)
၁၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-6-2020, 8:00 PM)
၁၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-6-2020, 8:00 AM)
၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-6-2020, 8:00 PM)
၁၈ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ ကြေညာချက် (11-6-2020)
၁၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-6-2020, 8:00 AM)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-6-2020, 8:00 PM)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-6-2020, 8:00 AM)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-6-2020, 8:00 PM)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-6-2020, 8:00 AM)
၂၄ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး)၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) နှင့် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန (မန္တလေး) တို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-6-2020, 8:00 PM)
၂၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-6-2020, 8:00 AM)
၂၇ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် The American Chamber of Commerce Myanmar ၏ ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (19-6-2020)
၂၈ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ခုနှစ် စီမံချက် ရန်ပုံငွေ ရရှိသုံးစွဲမှုအခြေအနေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (19-6-2020)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-6-2020, 8:00 PM)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-6-2020, 8:00 AM)
၃၁ ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ
၃၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-6-2020, 8:00 PM)
၃၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-6-2020, 8:00 AM)
၃၄ ဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-6-2020, 8:00 PM)
၃၆ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၃၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-6-2020, 8:00 AM)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-6-2020, 8:00 PM)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-6-2020, 8:00 AM)
၄၀ ဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ဘက်စုံခြုံငုံ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်ဆွေးနွေး (15-6-2020)
၄၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-6-2020, 8:00 PM)
၄၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-6-2020, 8:00 AM)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-6-2020, 8:00 PM)
၄၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-6-2020, 8:00 AM)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-6-2020, 8:00 PM)
၄၆ မိမိ၏ အရေး၊ မိမိ၏ မိသားစုနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အရေးကိစ္စဟု သဘောထားကာ ပြုမူကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ကြရမည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး (၁၃-၆-၂၀၂၀)
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-6-2020, 8:00 AM)
၄၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-6-2020, 8:00 PM)
၄၉ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၅၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-6-2020, 8:00 AM)
၅၁ COVID-19 အန္တရာယ် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ခွဲစိတ်ကုသမှု (COVID-19 Surgical Safety) ကိစ္စရပ်များအား Video Conferencing ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (11-6-2020)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-6-2020, 8:00 PM)
၅၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-6-2020, 8:00 AM)
၅၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-6-2020, 8:00 PM)
၅၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-6-2020, 8:00 AM)
၅၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-6-2020, 8:00 PM)
၅၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-6-2020, 8:00 AM)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-6-2020, 8:00 PM
၅၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-6-2020, 8:00 AM)
၆၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-6-2020, 8:00 PM)
၆၁ မပေါ့ဆသင့်သော COVID-19 ကပ်ရောဂါ (7-6-2020, 5:00 PM)
၆၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-6-2020, 8:00 AM)
၆၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-6-2020, 8:00 PM)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-6-2020, 8:00 AM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-6-2020, 8:00 PM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-6-2020, 8:00 am)
၆၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-6-2020, 8:00 pm)
၆၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-6-2020, 8:00 am)
၆၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-6-2020, 8:00 pm)
၇၀ COVID- 19 ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် ပြည်သူလူထုမှလိုက်နာမှု အခြေအနေကို စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၏ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များကို အသိပေးဖြန့်ဝေတင်ပြခြင်း (3-6-2020)
၇၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-6-2020, 7:00 am)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-6-2020, 8:00 pm)
၇၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-6-2020, 7:00 am)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-6-2020, 8:00 pm)
၇၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-6-2020, 7:30 am)
၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-5-2020, 8:00 pm)
၂ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (31-5-2020)
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-5-2020, 7:00 am)
၄ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လာသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယခုအချိန်၌ အရေးကြီး (30-5-2020, 9:45 pm)
၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-5-2020, 8:00 pm)
၆ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) တွင် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့၌ စတင်တော့မည် (30-5-2020)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-5-2020, 7:00 am)
၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-5-2020, 8:00 pm)
၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-5-2020, 7:00 am)
၁၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-5-2020, 8:00 pm)
၁၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-5-2020, 7:00 am)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-5-2020, 8:00 pm)
၁၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-5-2020, 7:00 am)
၁၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (26-5-2020)
၁၅ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများကို စနစ်တကျပြန်လည်လက်ခံ၍ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လူမှုရေးဝန်ကြီးများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး (26-5-2020)
၁၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-5-2020, 8:00 pm)
၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-5-2020, 7:00 am)
၁၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-5-2020, 8:00 pm)
၁၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-5-2020, 7:00 am)
၂၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-5-2020, 8:00 pm)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-5-2020, 7:00 am)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-5-2020, 8:00 pm)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-5-2020, 7:00 am)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-5-2020, 8:00 pm)
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-5-2020, 7:00 am)
၂၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (21-5-2020)
၂၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-5-2020, 8:00 pm)
၂၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-5-2020, 7:00 am)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-5-2020, 8:00 pm)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-5-2020, 7:00 am)
၃၁ ပြည်သူ့ဆေးရုံအသီးသီး၏ ပြင်ပလူနာဌာန/ကာကွယ်ဆေးထိုးခန်း ဖုန်းနံပါတ်များ
၃၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-5-2020, 8:00 pm)
၃၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-5-2020, 7:00 am)
၃၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-5-2020, 8:00 pm)
၃၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-5-2020, 7:30 am)
၃၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-5-2020, 8:00 pm)
၃၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-5-2020, 7:00 am)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-5-2020, 8:00 pm)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-5-2020, 7:00 am)
၄၀ မိမိအိမ်တွင်း နေထိုင်စေရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်သည့် မြို့နယ်(၅)မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသို့ ပန်ကြားချက် (15-5-2020)
၄၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-5-2020, 8:00 pm)
၄၂ ပြည်သူများအနေဖြင့် ပေါ့ဆမှုမရှိဘဲ COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု မရှိစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်မှုများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ဆက်လက်လိုက်နာကြပါရန် (15-5-2020)
၄၃ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်မည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း (15-5-2020)
၄၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-5-2020, 7:00 am)
၄၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲနမူနာယူခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှု (14-5-2020)
၄၆ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမိန့်အမှတ် (၅၀/၂၀၂၀) (14-5-2020)
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-5-2020, 8:00 pm)
၄၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-5-2020, 7:00 am)
၄၉ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲနမူနာယူခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှု (13-5-2020)
၅၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-5-2020, 8:00 pm)
၅၁ COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော ရသုံးလက်ကျန်၊ လိုအပ်ချက် Data များနှင့် ပတ်သက်၍ Video Conferencing ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ (13-5-2020)
၅၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-5-2020, 7:00 am)
၅၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-5-2020, 8:00 pm)
၅၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-5-2020, 8:00 pm)
၅၅ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှု အခြေအနေ (11-5-2020)
၅၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-5-2020, 11:00 pm)
၅၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-5-2020, 8:00 pm)
၅၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-5-2020, 9:00 pm)
၅၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (9-5-2020)
၆၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-5-2020, 8:00 pm)
၆၁ COVID-19 Acute respiratory disease ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ခုတင်-၁၀၀ ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံများမှ မေ့ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်များနှင့် Video Conferencing ပြုလုပ်ခြင်း (9-5-2020)
၆၂ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများတွင်တွေ့ရှိရသော ရောဂါလက္ခဏာများအား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန်ဖော်ပြခြင်း (9-5-2020)
၆၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-5-2020, 10:00 PM)
၆၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-5-2020, 8:00 pm)
၆၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-5-2020, 7:00 am)
၆၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-5-2020, 8:00 pm)
၆၇ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လွှတ်တော်အရပ်ရပ် ကျင်းပဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက် (5-5-2020)
၆၈ COVID-19 ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည်သူများတိကျစွာဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပန်ကြားခြင်း (3-5-2020)
၆၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
၇၀ ကူးစက်မြန်ကိုရိုနာအဆုတ်ရောင်ကပ်ရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် ပြည်သူလူထုမှလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေကို လေ့လာသော သုတေသန (7-5-2020)
၇၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-5-2020, 7:00 am)
၇၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-5-2020, 8:00 pm)
၇၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-5-2020, 7:00 am)
၇၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-5-2020, 11:15 pm)
၇၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-5-2020, 8:00 pm)
၇၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-5-2020, 8:00 pm)
၇၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-5-2020, 7:00 am)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-5-2020, 8:00 pm)
၇၉ COVID - 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်လျှော့ချခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးပါကြောင်း (3-5-2020)
၈၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-5-2020, 7:00 am)
၈၁ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို စနစ်တကျ ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးနှင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Video Conferencing ဖြင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း (2-5-2020)
၈၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-5-2020, 8:00 pm)
၈၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-5-2020, 8:00 pm)
၈၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-5-2020, 7:00 am)
၁ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့မှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အထူးဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် (Special Video Conference of Health Ministers of ASEAN and the United States in Enhancing Cooperation on COVID-19 Response) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်ဆွေးနွေး (30-4-2020)
၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-4-2020, 8:00 pm)
၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-4-2020, 7:00 am)
၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-4-2020, 8:00 pm)
၅ ကျန်းမာရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်နေမှု (29-4-2020)
၆ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာအမှတ် (Case –110) သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-4-2020, 1:00PM)
၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-4-2020, 7:00 am)
၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-4-2020, 8:00 pm)
၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-4-2020, 7:00 am)
၁၀ Video Conferencing ဖြင့် ဗဟိုကွင်းဆင်းအဖွဲ့များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများနှင့် ဆေးရုံကြီးများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆွေးနွေး (27-4-2020)
၁၁ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ (27-4-2020)
၁၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-4-2020, 8:00 pm)
၁၃ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြု ဒရုန်းယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (27-4-2020)
၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-4-2020, 7:00 am)
၁၅ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) ပြင်ဆင်ထားရှိဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် Video Conferencing ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (26-4-2020)
၁၆ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) တွင် Cobas 6800 စက်တပ်ဆင်လျက်ရှိ (26-4-2020)
၁၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-4-2020, 8:00 pm)
၁၈ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာအမှတ် (၁၄၄) အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော “ချန်ရီ” ဖိနပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု (26-4-2020)
၁၉ COVID-19 Situation of Myanmar: မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (26-4-2020, 6:00 pm)
၂၀ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားမှုကို ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူများအား အသိပေးတင်ပြခြင်းနှင့် ပန်ကြားခြင်း (26-4-2020)
၂၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-4-2020, 7:00 am)
၂၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-4-2020, 8:00 pm)
၂၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-4-2020, 10:00 am)
၂၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-4-2020, 11:00 pm)
၂၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-4-2020, 8:00 pm)
၂၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-4-2020, 10:00 am)
၂၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-4-2020, 9:00 am)
၂၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-4-2020, 00:30 am)
၂၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-4-2020, 8:00 pm)
၃၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-4-2020, 10:00 am)
၃၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-4-2020, 7:00 AM)
၃၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ လှူဒါန်းမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (22-4-2020)
၃၃ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အသိအမှတ်ပြု အားပေးစကားပြောကြား (22-4-2020)
၃၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-4-2020, 8:00 PM)
၃၅ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ အလုပ်ဌာနများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရမည့် အချက်များအား စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (22-4-2020)
၃၆ COVID-19 ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ကွယ်လွန်မှုအပေါ် ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း (22-4-2020)
၃၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-4-2020, 10:00 AM)
၃၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-4-2020, 10:00 PM)
၃၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-4-2020, 8:00 PM)
၄၀ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-4-2020, 11:00 PM)
၄၁ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှုလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ ခြုံငုံဆန်းစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (20-4-2020)
၄၂ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-4-2020, 8:00 PM)
၄၃ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-4-2020, 10:00 AM)
၄၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-4-2020, 11:15 PM)
၄၅ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-4-2020, 8:00 PM)
၄၆ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-4-2020, 7:00 am)
၄၇ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-4-2020, 9:00 PM)
၄၈ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှု အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှမှု webinar စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား (18-4-2020)
၄၉ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-4-2020, 8:00 pm)
၅၀ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၃၈/၂၀၂၀ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (18-4-2020)
၅၁ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-4-2020, 10:00 am)
၅၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-4-2020, 8:00 am)
၅၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-4-2020, 8:00 pm)
၅၄ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-4-2020, 10:00 am)
၅၅ COVID-19 ရောဂါအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအခြေအနေ (17-4-2020, 2:00 AM)
၅၆ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၃၇/၂၀၂၀ (16-4-2020)
၅၇ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပံ့ပိုးရန် လာရောက်ခဲ့သည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံတွေ့ဆုံ (16-4-2020)
၅၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-4-2020, 8:00 pm)
၅၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-4-2020, 10:00 am)
၆၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-4-2020, 8:00 pm)
၆၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-4-2020, 10:30 am)
၆၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-4-2020, 8:00 pm)
၆၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-4-2020, 4:00 pm)
၆၄ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-4-2020, 00:15 am)
၆၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-4-2020, 10:15 pm)
၆၆ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးCOVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (13-4-2020)
၆၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-4-2020, 8:00 pm)
၆၈ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတွင် COVID-19 သံသယ လူနာများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို Polymerase Chain Reaction (PCR) နည်းပညာဖြင့် ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပုံအဆင့်ဆင့် (13-4-2020)
၆၉ Reorientation workshop on central level supervisors / central RRT on COVID- 19 surveillance and responses ဆောင်ရွက် (12-4-2020)
၇၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-4-2020, 00:30 am)
၇၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-4-2020, 8:00 pm)
၇၂ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရာနေရာ (quarantine site) များနှင့် မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ် (၂) တို့သို့ကွင်းဆင်းသွားရောက်၊ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (12-4-2020)
၇၃ COVID-19 ရောဂါအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအခြေအနေ (12-4-2020, 6:30 pm)
၇၄ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-4-2020, 2:00 AM)
၇၅ အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း(၂၁)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (11-4-2020)
၇၆ Facility Quarantine (၂၁)ရက်နှင့် မိမိနေအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်ခြင်း Home Quarantine ကာလ(၇)ရက် ဆောင်ရွက်သွားရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း (11-4-2020)
၇၇ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (C-023, C-024, C-025, C-026, C-027) တို့ သွားလာခဲ့သော ခရီးလမ်းကြောင်းများ (11-4-2020)
၇၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-4-2020, 8:00PM)
၇၉ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံ၊ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရာနေရာ (quarantine site)နှင့် ဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက် (11-4-2020)
၈၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-4-2020, 10:15PM)
၈၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-4-2020, 8:00PM)
၈၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (10-4-2020)
၈၃ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ဆန္ဒအလျှောက်အဆိုပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနေထိုင်နေရာသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်တွေ့ဆုံ (10-4-2020)
၈၄ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-4-2020, 3:00AM)
၈၅ COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များကို အခမဲ့မေးမြန်းနိုင်သော National Call Center ကို 2019 နံပါတ်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ် (9-4-2020)
၈၆ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-4-2020, 8:00 PM)
၈၇ အသွားအလာကန့်သတ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများ၌ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (quarantine) လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများထံအသိပေးပြောကြားခြင်း (9-4-2020)
၈၈ COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု (9-4-2020)
၈၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-4-2020, 8:00 PM)
၉၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (8-4-2020)
၉၁ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပံ့ပိုးရန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ လာရောက် (8-4-2020)
၉၂ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၂) ဦးသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-4-2020)
၉၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ စေတနာရှင် ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များက အလှူငွေနှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း (7-4-2020)
၉၄ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Video Conferencing ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆေးပညာနှင့် အပူပိုင်းဆေးပညာ ပါမောက္ခများ၊ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေး (7-4-2020)
၉၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-4-2020, 8:00PM)
၉၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ စေတနာရှင် ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များက အလှူငွေနှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း (6-4-2020)
၉၇ COVID-19 Clinical Management အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ့ဆုံ၍ COVID-19 ကုသရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆွေးနွေး (6-4-2020)
၉၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-4-2020, 8:00PM)
၉၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (5-4-2020, 8:30 AM)
၁၀၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-4-2020, 8:00 PM)
၁၀၁ အသွားအလာကန့်သတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာနေရာများနှင့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကွင်းဆင်းသွားရောက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟိတစေနာ့ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံအားပေး၊ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် (4-4-2020)
၁၀၂ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မိမိ၏ဝန်ထမ်းများကို ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (4-4-2020)
၁၀၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-4-2020, 8:00PM)
၁၀၄ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်မှု ရှိခဲ့သူများ သိရှိစေရန် အချက်အလက်များနှင့် သတင်းပေးပို့ရန် Webpage အား လွှင့်တင်ဆောင်ရွက် (3-4-2020)
၁၀၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီသို့ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း (3-4-2020)
၁၀၆ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (3-4-2020)
၁၀၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ စေတနာရှင် ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များက အလှူငွေနှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း (2-4-2020)
၁၀၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-4-2020, 8:00PM)
၁၀၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-4-2020, 8:00PM)
၁၁၀ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၄၆/၂၀၂၀) ကျင်းပ (1-4-2020, 1:00PM)
၁၁၁ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ၊ ဗဟိုအဆင့်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးများနှင့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲဌာနများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံခွဲဝေဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု အခြေအနေ (1-4-2020)
၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-3-2020, 8:00 PM)
၂ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် AYA SOMPO အာမခံကုမ္ပဏီတို့မှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရံပုံငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (31-3-2020)
၃ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (Central Command Centre) လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (31-3-2020)
၄ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၁) ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-3-2020, 12:30 PM)
၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း (30-3-2020)
၆ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၄၅/၂၀၂၀) ကျင်းပ (30-3-2020)
၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (30-3-2020, 7:30 PM)
၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ စေတနာရှင် ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များက အလှူငွေနှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ် (30-3-2020)
၉ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေထားရှိမှု (30-3-2020)
၁၀ COVID-19 ရောဂါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အဆင့်အား ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရပ်တန့်နိုင်ရန် မိမိတို့ပြည်သူများအားလုံးမှ လတ်တလော ဦးစားပေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (29-3-2020)
၁၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-3-2020, 10:30 PM)
၁၂ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်သော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၄၄/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (29-3-2020)
၁၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-3-2020, 8:00 PM)
၁၄ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများအား မည့်သည့်ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားမဆို ထုတ်ပေးခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက် (29-3-2020)
၁၅ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးရုံများ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် Video Conferencing ပြုလုပ်(28-3-2020)
၁၆ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-3-2020, 8:00 PM)
၁၇ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေထားရှိမှု (28-3-2020)
၁၈ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၄၃/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (28-3-2020)
၁၉ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းငွေ ကျပ် (၇၈.၄) သိန်း ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (28-3-2020)
၂၀ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ (28-3-2020)
၂၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-3-2020, 00:15 AM)
၂၂ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၅)ဦး သွားလာခဲ့သော ခရီးလမ်းကြောင်းများ (27-3-2020)
၂၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-3-2020, 8:00 PM)
၂၄ COVID-19 ရောဂါတုံ့ပြန်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ဆေးရုံများ၏ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု သုံးသပ်ရေးနှင့် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ Ad hoc ကော်မတီ အစည်းအဝေးပြုလုပ် (27-3-2020, 1:00PM)
၂၅ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၄၂/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (27-3-2020, 9:00 AM)
၂၆ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-3-2020, 1:45 AM)
၂၇ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအားမေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားချက် (26-3-2020)
၂၈ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၄၁/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (26-3-2020, 8:00 AM)
၂၉ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် Galaxy Software Company မိသားစု ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) လှူဒါန်း (26-3-2020)
၃၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-3-2020, 9:45 PM)
၃၁ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (25-3-2020, 8:15 PM)
၃၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-3-2020, 8:00 PM)
၃၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အလှူငွေများ လာရောက်လှူဒါန်း (25-3-2020)
၃၄ အင်တာနက်ကွန်ရက် အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၄၀/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (25-3-2020)
၃၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-3-2020, 01:00 AM)
၃၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း (24-3-2020)
၃၇ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (24-3-2020, 8:15 PM)
၃၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-3-2020, 8:00 PM)
၃၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ငွေကျပ်သိန်း (၁,၀၀၀) လှူဒါန်း (24-3-2020)
၄၀ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ခရီးသွားများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း (24-3-2020)
၄၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-3-2020, 00:30 AM)
၄၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-3-2020, 11:45 PM)
၄၃ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်၊ တံတားအမှတ် (၂) တွင် COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ (23-3-2020)
၄၄ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (23-3-2020, 8:15 PM)
၄၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-3-2020, 8:00 PM)
၄၆ အင်တာနက်ကွန်ရက် အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၃၉/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (23-3-2020, 9:30 AM)
၄၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-3-2020, 10:30 PM)
၄၈ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (22-3-2020, 8:30 PM)
၄၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-3-2020, 8:00 PM)
၅၀ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၃၈/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (22-3-2020, 5:30 PM)
၅၁ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (quarantine) ပြုလုပ်ရန် နေရာအဖြစ်အသုံးပြုမည့် မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒရာမကျောင်းတိုက်သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကွင်းဆင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု (22-3-2020)
၅၂ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိ၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (quarantine) ဆောင်ရွက်ရာ နေရာများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကွင်းဆင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု (21-3-2020)
၅၃ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (21-3-2020, 8:30 PM)
၅၄ COVID-19 ရောဂါကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-3-2020, 8:00 PM)
၅၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (21-3-2020)
၅၆ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားချက် (21-3-2020)
၅၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(20-3-20, 9:30 PM)
၅၈ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (20-3-2020, 9:30 PM)
၅၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(20-3-20, 8:00 PM)
၆၀ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၇/၂၀၂၀) ကျင်းပ (20-3-2020, 9:00 AM)
၆၁ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (19-3-20, 8:15 PM)
၆၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(19-3-20, 8:00 PM)
၆၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲရန် ငွေကျပ် သိန်း (၃,၀၀၀) လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (19-3-2020)
၆၄ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (18-3-2020, 8:15PM)
၆၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-3-2020, 8:00PM)
၆၆ COVID-19 ရောဂါ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှု အထူးအစည်းအဝေးကို အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပ (18-3-2020, 9:00 AM)
၆၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-3-2020, 00:15 AM)
၆၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၆/၂၀၂၀) ကျင်းပ (17-3-2020, 9:00 AM)
၆၉ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (17-3-2020, 8:15 PM)
၇၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(17-3-2020, 8:00 PM)
၇၁ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း (16-3-2020)
၇၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-3-2020, 10:00 PM)
၇၃ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မိမိ၏ဝန်ထမ်းများကို ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (16-3-2020)
၇၄ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (16-3-2020, 8:15 PM)
၇၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-3-2020, 8:00 PM)
၇၆ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသည့် COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၃၅/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (16-3-2020, 9:00 AM)
၇၇ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ကုသရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမှုအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (15-3-2020)
၇၈ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့်နေ့စဉ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၃၄/၂၀၂၀) ကျင်းပ (15-3-2020, 8:00 AM)
၇၉ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (15-3-2020, 8:15 PM)
၈၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-3-2020, 8:00 PM)
၈၁ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (14-3-2020, 8:15 PM)
၈၂ Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-3-2020, 8:00 PM)
၈၃ COVID-19 ရောဂါလူနာများတွေ့ရှိပါက ကုသမှုပေးရန်အတွက် ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းနှင့် လှူဒါန်းငွေများ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ (14-3-2020)
၈၄ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ)(13-3-2020, 8:15 PM)
၈၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-3-2020, 8:00 PM)
၈၆ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများအား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Video Conference အစည်းအဝေးကျင်းပ (13-3-2020)
၈၇ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုပါဝင်၍ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် (13-3-2020)
၈၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း (13-3-2020)
၈၉ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) တွင် COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြည့်လူနာနှင့် သံသယ လူနာများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို Polymerase Chain Reaction (PCR) နည်းပညာဖြင့် ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပုံအဆင့်ဆင့် (13-3-2020)
၉၀ COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား အသိပေးပန်ကြားခြင်း(13-3-2020, 2:00 PM)
၉၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-3-2020, 0:15 AM)
၉၂ ကောလာဟလသတင်းမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံ ရှင်းလင်းခြင်း (12-3-2020, 10:00PM)
၉၃ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (12-3-2020, 8:15 PM)
၉၄ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-3-2020, 8:00 PM)
၉၅ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၃/ ၂၀၂၀) ကျင်းပ (12-3-2020)
၉၆ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (11-3-2020, 8:15 PM)
၉၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-3-2020, 8:00 PM)
၉၈ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (10-3-2020, 8:15 PM)
၉၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-3-2020, 8:00 PM)
၁၀၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၂/၂၀၂၀) ကျင်းပ (10-3-2020, 9:00 AM)
၁၀၁ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်များ (၃-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ (9-3-2020)
၁၀၂ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၉-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (9-3-2020, 9:00 PM)
၁၀၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-3-2020, 8:00 PM)
၁၀၄ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ တစ်ဆင့် ပြည်သူများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများထံသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အသိပေးပြောကြား (9-3-2020)
၁၀၅ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (8-3-2020, 8:15 PM)
၁၀၆ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-3-2020, 8:00 PM)
၁၀၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-3-2020, 8:00 PM)
၁၀၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-3-2020, 4:30 PM)
၁၀၉ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-3-2020, 9:15 PM)
၁၁၀ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-3-2020, 8:00 PM)
၁၁၁ COVID-19 Acute respiratory disease ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဆေးရုံများနှင့် Video Conferencing ပြုလုပ်ခြင်း (6-3-2020, 10:30 AM)
၁၁၂ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၀/၂၀၂၀) ကျင်းပ (6-3-2020, 7:30 AM)
၁၁၃ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (5-3-2020, 8:15 PM)
၁၁၄ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-3-2020, 8:00 PM)
၁၁၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-3-2020, 9:15 PM)
၁၁၆ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (4-3-2020, 8:15 PM)
၁၁၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-3-2020, 8:00 PM)
၁၁၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၉/၂၀၂၀) ကျင်းပ (4-3-2020, 8:00 AM)
၁၁၉ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ (3-3-2020)
၁၂၀ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (3-3-2020, 8:15 PM)
၁၂၁ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (3-3-2020, 8:00 PM)
၁၂၂ COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများသို့ အသိပေးနှိုးဆော်ချက် (3-3-2020)
၁၂၃ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၈/၂၀၂၀) ကျင်းပ (3-3-2020, 7:30 AM)
၁၂၄ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (2-3-2020, 8:15 PM)
၁၂၅ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-3-2020, 8:00 PM)
၁၂၆ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (1-3-2020, 8:15 PM)
၁၂၇ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (1-3-2020, 8:00 PM)
၁၂၈ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၇/၂၀၂၀) ကျင်းပ (1-3-2020, 8:30 AM)
၁ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၉-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (29-2-2020 , 8:15 p.m)
၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်(29-2-2020, 8:30 pm)
၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-2-2020, 8:00 p.m)
၄ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆-၂-၂၀၂၀) အထိ
၅ Coronavirus Disease (COVID-19) ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (28-2-2020 , 8:15 p.m)
၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (28-2-2020, 8:00 p.m)
၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၆/၂၀၂၀) ကျင်းပ (28-2-2020,9a.m)
၈ ကူးစက်မြန်ရောဂါ သို့မဟုတ် တိုင်ကြားရမည့်ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်
၉ CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံ ပန်ကြားခြင်း နေပြည်တော်၊ (28-2-2020, 11 a.m)
၁၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-2-2020, 8:15 pm)
၁၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (27-2-2020, 8:00 pm)
၁၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၅/၂၀၂၀) ကျင်းပ (27-2-2020, 8:30 pm)
၁၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-2-2020, 8:15 p.m)
၁၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (26-2-2020, 8:00 p.m)
၁၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၄/၂၀၂၀) ကျင်းပ (26-2-2020, 8:00 a.m)
၁၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမအကြိမ်) ကျင်းပ (25-2-2020, 11:00 a.m)
၁၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-2-2020, 8:15 p.m)
၁၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-2-2020, 8:00 p.m)
၁၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၂-၂-၂၀၂၀) အထိ
၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၃/၂၀၂၀) ကျင်းပ (24-2-2020, 9:00 am)
၂၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-2-2020, 9:00 p.m)
၂၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (24-2-2020, 8:00 p.m)
၂၃ COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကို ယခုထက်ပိုမိုပြီး ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် Comprehensive Health Sector Contingency Plan for COVID-19 ရေးဆွဲဆောင်ရွက်
၂၄ CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံ ပန်ကြားခြင်း နေပြည်တော်၊ (23-2-2020, 22:30 p.m)
၂၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (23-2-2020, 8:00 p.m)
၂၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-2-2020, 10:00 pm)
၂၇ 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-2-2020, 8:00 pm)
၂၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Coronavirus Disease (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
၂၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-2-2020, 8:00 am)
၃၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (21-2-2020, 8:00 pm)
၃၁ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၂/၂၀၂၀) ကျင်းပ (21-2-2020, 9:00 am)
၃၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ (21-2-2020) (9:00 AM)
၃၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာန (US Centers for Disease Control and Prevention) mission အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (20-2-2020)
၃၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-2-2020, 8:15 p.m)
၃၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-2-2020, 8:00 p.m)
၃၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (20-2-2020) (8:30 am)
၃၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-2-2020) (8:15 pm)
၃၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-2-2020) (8:00 pm)
၃၉ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-2-2020) (8:15 pm)
၄၀ Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (18-2-2020) (8:00 PM)
၄၁ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ COVID-19 လတ်တလော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ကြီးဌာနထံ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ
၄၂ 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 (𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၉/၂၀၂၀) ကျင်းပ (17-2-2020, 7:30 a.m)
၄၃ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-2-2020, 8:15 p.m)
၄၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (17-2-2020, 8:00 p.m)
၄၅ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (NHL) မှ ပညာရှင်များ၏ ကြိုပမ်းမှုဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) COVID-19 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးတော့မည် (17-2-2020)
၄၆ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ (17-2-20202)
၄၇ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ပြောကြားချက်များ (၂၄-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၄-၂-၂၀၂၀) အထိ
၄၈ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-2-2020, 8:00 p.m)
၄၉ ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်ကာလ ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်၍ နေအိမ်သို့ပြန်မည့် ဝူဟန်မြို့မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သွားရောက်တွေ့ဆုံ
၅၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-2-2020, 8:00 p.m)
၅၁ Coronavirus Disease (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် မန္တလေးမြို့ပေါ်ဆေးရုံများအားလုံးတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဝန်ကြီးတက်ရောက် (၁၅-၂-၂၀၂၀)
၅၂ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-2-2020, 8:00 a.m)
၅၃ 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 (𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၈/၂၀၂၀) ကျင်းပ (13-2-2020, 8:30 a.m)
၅၄ 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗 (𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-2-2020, 8:00 p.m)
၅၅ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (13-2-2020, 8:00 p.m)
၅၆ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၇/၂၀၂၀) ကျင်းပ (13-2-2020, 8:30 a.m)
၅၇ ကောလာဟလ သတင်းမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (13-2-2020)
၅၈ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ (10-2-2020) (3:00 pm)
၅၉ 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (12-2-2020, 8:00 p.m)
၆၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၆/၂၀၂၀)ကျင်းပ (12-2-2020, 11:00 am)
၆၁ 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-2-2020, 8 p.m)
၆၂ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၅/၂၀၂၀) ကျင်းပ (11-2-2020, 8:30 a.m)
၆၃ 2019-nCoV Acute Respiratory Diseases ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (11-2-2020, 1:00 p.m)
၆၄ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောလတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၄/၂၀၂၀) ကျင်းပ (10-2-2020, 11:00 a.m)
၆၅ 2019 Novel Coronavirus လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (10-2-2020, 8:00 p.m)
၆၆ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သက်သည့် Clinical Management Committee ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (၁၀-၂-၂၀၂၀)
၆၇ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောလတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၃/၂၀၂၀) ကျင်းပ (9-2-2020, 8:00 a.m)
၆၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် (၉-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၇:၃၀) တွင် တက်ရောက်ကုသခဲ့သော လူနာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-2-2020, 9:00 p.m)
၆၉ 2019 Novel Coronavirus လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (9-2-2020, 8:15)
၇၀ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ 2019-nCoV လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ဆေးပစ္စည်းများ ဝန်ကြီးဌာနထံ လာရောက်လှူဒါန်း (၉-၂-၂၀၂၀)
၇၁ 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (8-2-2020,10:50 p.m)
၇၂ 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောလတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၂/၂၀၂၀) ကျင်းပ (8-2-2020, 11:00 A.M)
၇၃ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-2-2020, 7:45 p.m)
၇၄ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-2-2020, 6:40 p.m)
၇၅ 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော လတ်တလော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ (7-2-2020, 9:00 AM)
၇၆ 𝟐𝟎𝟏𝟗-𝐧𝐂𝐨𝐕 𝐚𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞 ရောဂါစော၉င့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (7-2-2020, 4:00 p.m)
၇၇ 2019-nCoV acute respiratory disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-2-2020, 7:15 p.m)
၇၈ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (6-2-2020, 6:45 p.m)
၇၉ 2019-nCoV လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အသိပေးရှင်းလင်းပြောကြား (6-2-2020, 9:00 a.m)
၈၀ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (5-2-2020, 10:00 p.m)
၈၁ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၅-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၇:၃၀) နာရီအချိန်)
၈၂ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၉/၂၀၂၀) ကျင်းပ (၅-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၈) နာရီ)
၈၃ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၉) နာရီအချိန်)
၈၄ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၈/၂၀၂၀) ကျင်းပ (၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၇ နာရီ)
၈၅ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ဗဟိုကော်မတီပူးတွဲ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ဆွေးနွေးချက်များ (၃-၂-၂၀၂၀)
၈၆ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ (၃-၂-၂၀၂၀)
၈၇ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ (၃-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီ
၈၈ 2019-nCoV acute respiratory disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃-၂-၂၀၂၀ ရနေ့၊ ည (၉:၄၀) နာရီအချိန်)
၈၉ 2019-nCoV Acute Respiratory Disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၉) နာရီအချိန်)
၉၀ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၇/၂၀၂၀) ကျင်းပ (၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၁၅) နာရီအချိန်)
၉၁ 2019-nCoV acute respiratory disease ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၁:၂၅) နာရီအချိန်)
၉၂ 2019 Novel Coronavirus ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၈:၂၅) နာရီအချိန်)
၉၃ 2019 Novel Coronavirus ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ညနေ (၆:၀၀) နာရီအချိန်)
၉၄ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၆/၂၀၂၀) ကျင်းပ (၂-၂-၂၀၂၀)
၉၅ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ လာရောက်သော လေကြောင်းခရီးသည်တစ်ဦးကို စနစ်တကျစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိ (၂-၂-၂၀၂၀၊ နေ့လယ် (၁:၃၀) နာရီအချိန်)
၉၆ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ လာရောက်သူများအား ဆိုက်ရောက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (visa on arrival) ထုတ်ပေးသည့်ကိစ္စရပ်များ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရှိရေး သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန် အပါအဝင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများဆွေးနွေး (၁-၂-၂၀၂၀)
၁ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့မှ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ခရီးသည် (၁) ဦးအား လိုအပ်သော ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု (31-1-2020)
၂ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဖျားနာခရီးသည်တစ်ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ၍ 2019 Novel Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက် (31-1-2020)
၃ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၃/၂၀၂၀ Novel Coronavirus (2019-nCov) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း (30-1-2020)
၄ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (30-1-2020)
၅ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၀) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (29-1-2020)
၆ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ တာဝန်ရှိသူများကို မှာကြားချက်များ (28-1-2020)
၇ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ တာန်ရှိသူများကို မှာကြားချက်များ (28-1-2020)
၈ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (28-1-2020)
၉ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (28-1-2020)
၁၀ 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရေး ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး၊ ကုသရေး၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးနှင့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးတို့မှ အကြီးအကဲများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (27-1-2020)
၁၁ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းများအား 2019 Novel Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (27-1-2020)
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆေးရုံများအားလုံးတွင် 2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက် (27-1-2020)
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားသည့် လူနာမရှိ၊ လူနာတွေ့ရှိပါက အချိန်မီကုသနိုင်ရန် ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးတွင် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရှိ (26-1-2020)
၁၄ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (25-1-2020)
၁၅ (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၅) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်က တာဝန်ရှိသူများကို မှာကြားချက်များ (25-1-2020)
၁၆ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လှည့်လည်ကြည့်ရှု (25-1-2020)
၁၇ 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အစည်းအဝေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ပြုလုပ် (24-1-2020)
၁၈ ​ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ အစည်းအဝေးကျင်းပ (24-1-2020)
၁၉ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးရသတင်းများအား တင်ပြခြင်း (22-1-2020)
၂၀ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါအကြောင်း (18-1-2020)
၂၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် Advocacy Meeting on Prevention and Control of Novel coronovirus Infection ကျင်းပပြုလုပ် (16-1-2020)
၂၂ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော Novel Coronavirus ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် Viral Pneumonia ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက် (15-1-2020)
၂၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တုပ်ကွေးဆန်သောရောဂါ လက္ခဏာနှင့် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် (၁၂-၁-၂၀၂၀)၊ (၁၃-၁-၂၀၂၀) (14-1-2020)
၂၄ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော Viral Pneumonia ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပွားနေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၌ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ် (8-1-2020)
၂၅ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော Viral Pnuemonia ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားနေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ် (8-1-2020)
၂၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တုပ်ကွေးဆန်သော ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြှင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် (5-1-2020)
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီး၏ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ - Click Here ​​
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ
၁ Novel Coronavirus (2019-nCoV): All information and guidance from World Health Organization (WHO) regarding the current outbreak
၂ Questions & Answers on Coronaviruses (9-1-2020)
၃ Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) (23-1-2020)
၄ Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) (30-1-2020)
၅ Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports
Author: MOHS-Admin Last modified on Sunday, 29 Nov 20